modular Chiller, Air ကိုတရုတ်ပြည်ရှိစက်မှုရေခဲသေတ္တာပစ္စည်းကိရိယာ, ရေခဲသေတ္တာသတ်မှတ်မည်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းအအေး
Air ကို Chiller အအေး
Shenzhen city KayDeli Refrigeration Equipment Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE ဖေါ်ပြချက်:modular Chiller,Air ကိုစက်မှုရေခဲသေတ္တာပစ္စည်းအအေး,Refrigerating သတ်မှတ်မည်,စက်မှုလေဆာ Chiller,,
အနိမ့်အပူချိန် Air ကို Chiller အအေး
ultra အနိမျ့အပူချိန်ရေ Chiller
စက်မှု Air ကို Chiller အအေး
ရေ Chilling ပစ္စည်းအအေး
ရေဝက်အူအမျိုးအစားစက်မှု Chiller အအေး
ရေရေခဲသေတ္တာ System ကိုအအေး
စက်မှုရေ Chiller အေး
Air ကို Chiller အအေး
Air ကို Chilling System ကိုအအေး
Air ကိုဝက်အူ Chiller အအေး
ဝက်အူ Air ကို Chiller အအေး
ဝက်အူရေ Chiller အအေး
Home > ထုတ်ကုန်များ > စက်မှု Chiller > Air ကိုစက်မှုရေခဲသေတ္တာပစ္စည်းအအေး
Air ကိုစက်မှုရေခဲသေတ္တာပစ္စည်းအအေး ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, modular Chiller, Air ကိုစက်မှုရေခဲသေတ္တာပစ္စည်းအအေး ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Refrigerating သတ်မှတ်မည် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
25HP Air ကိုရေ Chiller အအေး
20HP Air ကိုရေ Chiller အအေး
Air ကိုရေကူးကန်သည်ရေ Chiller အအေး
8HP Air ကို Scroll Chiller အအေး
နယူးဆိုက်ရောက်ဗီဇာ Air ကို Case စက်မှု Chiller အအေး
5HP Air ကို Scroll Chiller အအေး
ရေခဲပြင်ရေ Chiller အေး Air လေကြောင်းလိုင်း
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနလေဆာကိရိယာ Air ကို Chiller အအေး
စက်မှု Chiller Air ကိုရေ Chiller အအေး
60hp Air ကိုရေ Chiller အအေး
50hp Air ကိုရေ Chiller အအေး
40hp Air ကိုရေ Chiller အအေး
35HP Air ကိုရေ Chiller အအေး
30hp Air ကိုရေ Chiller အအေး
Supply နိုင်ခြင်း: 5000
KC / KWB စီးရီးစက်မှုဇုန် chiller အဓိကအားဖြင့်ပလတ်စတစ် & ရော်ဘာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လျှောက်ထားသည်, ကတိကျစွာတန်ဆာအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်နှင့်တန်ဆာသံသရာကိုအတိုကောက်, ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအစကျယ်ပြန့်, စက်မှု & အင်ဂျင်နီယာ, ဓာတု &...
တရုတ်နိုင်ငံ Air ကိုစက်မှုရေခဲသေတ္တာပစ္စည်းအအေး ပေးသွင်း
KC / KWB စီးရီးစက်မှုဇုန် chiller အဓိကအားဖြင့်ပလတ်စတစ် & ရော်ဘာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လျှောက်ထားသည်, ကတိကျစွာတန်ဆာအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်နှင့်တန်ဆာသံသရာကိုအတိုကောက်, ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအစကျယ်ပြန့်, စက်မှု & အင်ဂျင်နီယာ, ဓာတု & ဆေးဝါး, စားနပ်ရိက္ခာ & Beverage, လေဆာ, အီလက်ထရောနစ်စက်မှုလုပ်ငန်း, ချည်မျှင်, Electroplate Semi-စပယ်ယာစမ်းသပ်ခြင်း, ရေဂျက်, ဖုန်စုပ်အပေါ်ယံပိုင်း, ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်သတ္တုအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
¨မွေးစားကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ် Compressor နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် condenser နှင့်ရေငွေ့ပျံမြင့်မားအအေးထိရောက်မှုနိမ့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနိမ့်ဆူညံသံများနှင့်ကြာမြင့်စွာဝန်ဆောင်မှုဘဝအာမခံပါသည်။
35 ℃မှ¨ Chilling ရေအပူချိန်အကွာအဝေး5℃။
¨ R22 option ကိုမြင့်မားအအေးထိရောက်မှုတို့အတွက် R134A, CFC အခမဲ့အမျိုးအစား R407C, R410A, R404A ပညတ်တော်မူ၏။
¨ကျော်အရွယ်ရေငွေ့ပျံခြင်းနှင့် condenser 45C မြင့်မားတဲ့အပူချိန်အောက်မှာ run နေသည့် chiller ယူနစ်အာမခံပါသည်။
± 1 ℃အတွင်းတိကျသောအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ Microcomputer ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အ°။
¨နျ Standard option ကိုသံစုပ်စက်, သံမဏိသို့မဟုတ်မြင့်မားသောဓာတ်လှေကားစုပ်စက်တပ်ဆင်ထားပြီး။
¨ Multi-ကာကွယ်မှု devices တွေကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာအလုပ်လုပ်နေသည့် chiller ယူနစ်အာမခံပါသည်။
ယင်းရေငွေ့ပျံလည်း, ထိုတင့်ကားကိုယ်နှိုက်အေးပတ်ဝန်းကျင်အပူအမြတ်လျော့နည်းစေနှင့်, ထိရောက်မှုတိုးပွါးအဖြစ်¨အဆိုပါဆန်းသစ်ရေငွေ့ပျံ-In-အကြံပေးအဖွဲ့ configuration ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့တည်ငြိမ်ရေအပူချိန်သေချာ။
¨ KWB ရေ, စက်မှုလုပ်ငန်း chiller မွေးစား shell ကိုနှင့်ပြွန် condenser အအေးမြန်နှုန်းအပူလွန်ကျူးနှင့်မြင့်မားသောအအေးထိရောက်မှုတပ်ဆင်ထားပါကအပေါများရေနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ဧရိယာများတွင်အသုံးပြုခံရဖို့ကောင်းလှ၏။
¨ KC လေထုသန့်ရှင်းရေးနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်လွယ်ကူသောစက်မှုဇုန် chiller မွေးစားလူမီနီယမ်တောင် / ကြေးနီပြွန်အမျိုးအစား condenser, အအေး။
ပါဝါထောက်ပံ့ရေး°: 1PH 220V / 50HZ ----- 1 / 2HP 2HP မှ
60HP မှ 3PH 380V / 415V 50HZ ----- 3HP
 လိပ်စာ:306, 3rd Floor, Building A, Fulian Industrial Park, Dalang South Road, Longhua Street, Longhua New District, Shenzhen, China, Shenzhen, Guangdong
မူပိုင်ခွင့်© 2019 Shenzhen city KayDeli Refrigeration Equipment Co.,Ltd. All rights reserved ။ မှပံ့ပိုးသည်